Yini ebangela isifo sikashukela ezinganeni? > Izinkinga zesifo sikashukela
Isifo sikashukela esenzeka ezinganeni: izimbangela zalesi sifo
Lesi sifo singenye yezindlela ezivame kakhulu zohlelo lwe-endocrine. Kubonakala ngokuthi umzimba unezinkinga ngokukhiqizwa kwe-hormone insulin, esiza i-glucose ukuwohloka egazini.
Amaseli we-pancreatic anesibopho sokwenza i-hormone ebalulekile. Endabeni ye-pathologies yalesi sitho, ukukhiqizwa kwe-insulin kuyancishiswa, noma kumiswe ngokuphelele. Ushukela luqongelela egazini, okuholela ekukhuleni okukhulu kwezinga laso futhi, ngenxa yalokho, kunokusongela kwemiphumela emibi emzimbeni wengane.
Ukuvikela ingane yakho kusukela ekuqaleni kwalesi sifo esingathandeki, noma yimuphi umzali kufanele azi ukuthi kungani kungenzeka. Ukuthatha lonke ulwazi oludingekayo, kungenzeka ukuthi uthathe izinyathelo zokuvimbela ngesikhathi ukuze ulondoloze impilo yezingane. Vele, kunesici esinjalo esithonya ukukhula kwesifo njengelifa. Kodwa noma ngabe kunjalo kuleli cala, ngezinyathelo ezithathwe ngokufanele zokuthintela, ukuqala kwesifo kungabambezeleka iminyaka eminingi.
Izici zalesi sifo ebuntwaneni
Isifo sikashukela i-mellitus sehlukaniswe izinhlobo ezimbili: uhlobo lwesifo esinga-insulin futhi esincike ku-insulin. Ezinganeni, uhlobo oluya nge-insulin, olubizwa ngohlobo I, luvame ukutholakala kakhulu. Lesi sifo sihlala impilo yonke futhi sinezimpawu zaso senkambo ebuntwaneni. Lokhu kungenxa yokuthi ama-pancreas ezinganeni mancane kakhulu. Lapho eneminyaka eyi-12, ifinyelela isisindo esingama-gramu angama-50. Zonke izinqubo ze-metabolic emzimbeni wengane zishesha kakhulu kunokuba zindala. Yonke inqubo yokukhiqizwa kwe-insulin emzimbeni ilungiswa kuphela ibe yiminyaka emi-5. Kungakho-ke izingane ezineminyaka emi-5 kuya kwengu-12 zivame ukuba nesifo sikashukela sengane. Ezinganeni ezinefa elibi, le nkathi ibalulekile. Njengoba kungukudalwa komzimba okwenzeka ebuntwaneni, lapho ingane iba lesi sifo kuqala, inkambo yaso iba nzima kakhulu nemiphumela yaso iba mibi kakhulu.
Izimbangela zesifo sikashukela ezinganeni
Izimbangela zesifo sikashukela ezinganeni zingahluka. Kunezinto ezimbalwa zangaphandle nezangaphakathi ezingadala ukukhula kwalesi sifo enganeni. Izizathu ezivame kakhulu zokuthi kungani lesi sifo sivela ebuntwaneni zifaka:
imikhuhlane noma izifo ezinzima zegciwane.
Ukhuluphele kanye nokungondleki
Uma umndeni ungakuhlakuleli umsoco ofanele, futhi ingane idla amaswidi, imikhiqizo kafulawa kanye noshokoledi, okungukuthi, kalula izakhamzimba ezinamakhompiyutha, inani elikhulu, umthwalo kumanyikwe emzimbeni womntwana ukhuphuka kakhulu. Kancane kancane, lokhu kuholela ekunciphiseni kwamaseli e-pancreatic. Ngenxa yalokhu, inani le-insulin ezakhiqizayo liyancipha kancane kancane, futhi ngokuhamba kwesikhathi lingayeka ngokuphelele.
Ukuthuthukiswa kokukhuluphala ngokwemvelo kuholela ekuqokeleleni kwezicubu ze-adipose ngokweqile. Futhi yena, uba yindawo lapho ukuhlangana kwe-insulin kuvinjelwe ngentshiseko.
Imikhuhlane ejwayelekile ekuvuseleleni kwengane ukuvuselela amasosha omzimba. Njengoba amasosha omzimba kufanele avikele umzimba kumagciwane kanye namagciwane, ngomkhuhlane oqhubekayo, kuyaphoqelelwa ukuthi kukhiqizwe amasosha omzimba njalo. Uma ngabe le nqubo iqala ukungapheli, amasosha omzimba ayeki ukukhiqiza la ma-antibodies noma ngabe kungekho songo ngqo emzimbeni. Umphumela wokuphazamiseka kwezifo zokuzivikela komzimba ukuthi amasosha omzimba athuthukisiwe ahlasela amaseli e-pancreas, ngaleyo ndlela ebhubhise ngokwawo. Ngaphansi kokubhujiswa okunjalo, ama-pancreas ayeka ukukhiqiza i-insulin efanelekile yokusebenza komzimba ngokuphelele.
Isifiso sokuphazamiseka kwesifo sikashukela
I-Heredity yinto engathinta kakhulu ukwenzeka kwalesi sifo enganeni. Uma sikhuluma ngefa labazali, ikakhulukazi umama, khona-ke kungenzeka ukuthi isifo sikashukela enganeni sikhulu kakhulu. Ingazibonakalisa isencane kakhulu, nangesikhathi. Uma, ngaphandle kwakho konke, umama owatholakala enesifo sikashukela esenquma ukubeletha, kubalulekile ukulawula ngokuqinile isilinganiso se-glucose egazini ngesikhathi sokukhulelwa.
Le mfuneko ingenxa yokuthi i-placenta iyakwazi ukudonsa kahle futhi iqoqe ushukela egazini likamama. Endabeni yezinga layo elandayo, kunokuqunjelwa kwemvelo koshukela kwezicubu bese kwakheka izitho zomzimba, zikhula esibelethweni. Lokhu kuholela ekuzalweni kwengane esanda kuzalwa onesifo sikashukela sokuzalwa.
Umphumela wezifo ezedlule
Izifo ezithathelwanayo ezithwalwa yingane enezinto ezimbalwa ezikhona zingavusa ukuqala kwalesi sifo njengomthelela omkhulu.
Kuvela ukuthi ukukhula kwesifo sikashukela enganeni kuthinteka ezifweni ezinjengokuthi:
Ukutheleleka komzimba ngamagciwane okubangela ukuthuthukiswa kwalezi zifo kuvusa amandla okusebenza kokuzivikela okunamandla kokuzivikela komzimba. Ama-antibodies akhiqizwa amasosha omzimba aqala ukubhubhisa igciwane le-pathogenic, kanye nalo amaseli we-pancreatic. Umphumela uba ukwehluleka ekukhiqizweni kwe-insulin.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukuqala kwesifo sikashukela ngesimo sezinkinga ngemuva kokudluliselwa kwalezi zifo kungenzeka kuphela uma ingane inengqobelo yofuzo.
I-Hypodynamia njengesici esiyingozi
Ukuhamba okuphansi nokungatholakali okungenani kokusebenza ngokomzimba okuyisisekelo nakho kungadala ukukhula kwesifo sikashukela. Ukuqongelela kwezicubu ze-adipose kuzosiza ekuvimbeleni ukukhiqizwa kwe-insulin emzimbeni. Kubuye kufakazelwe ukuthi ukusebenza ngokomzimba kungavuselela umsebenzi wamaseli abhekene nokukhiqizwa kwale hormone. Enganeni edlala imidlalo ngokuhlelekile, izinga kashukela wegazi alidluli okuvumelekile.
Okudingayo ukunaka ukuqaphela lesi sifo ngesikhathi
Ngokuvamile kwenzeka ukuthi abazali bajwayele ukuqaphela lesi sifo futhi baqale ukukhathazeka kuphela ngemuva kokubonakala kwezimpawu ezithile ezithile. Abaningi bangabona ukuphuma izinyembezi, ukushintshwa kwemizwelo ejwayelekile kanye nokungaphatheki kahle njengokuphokophela kwengane noma uphawu lokuphanga. Ngeshwa, kwezinye izimo, lokhu kuziphatha okungenangqondo kwengane kungasayina ushukela wokuqala.
Into ekhona ukuthi ngokuqala kwalesi sifo, i-insulin ayakhiqizwa ngesilinganiso esifanele. Akusizi ukuthi ushukela ungene emzimbeni ngokugcwele. Amaseli wezitho ezahlukahlukene, kufaka phakathi ubuchopho, awatholi inani lamandla adingekayo. Lokhu akubangeli kuphela ukukhohlakala, kodwa futhi ukubekezela okungapheli, ubuthakathaka nokukhathala kwengane.
Vele, lezi zimpawu akuzona eziphambili ngesikhathi sokuxilongwa kwesifo sikashukela futhi zingabangelwa ezinye izifo noma ukusabela komzimba wengane. Kodwa noma kunjalo, njengoba besiza ukusola ukuthi kukhona okungahambi kahle ngempilo yengane, ungabanaki. Olunye ushintsho futhi lungakhombisa ukuqala kwalesi sifo, okuyinto nabazali okufanele bangayinaki:
ingane ihlala icela isiphuzo, ayikwazi ukuqeda ukoma kwayo,
ukukhula kwesifiso sokudla kanye nokunciphisa isisindo kanyekanye,
Kwesinye isikhathi kuba nokuhlanza, ingane ikhononda ngokuhlaselwa kwenhliziyo njalo,
Ngokubonakaliswa okuhleliwe kwalezi zimpawu, noma okungenani esisodwa sazo, kufanelekile ukuxhumana nodokotela ozonikeza ukuxilongwa okudingekayo.
Ngemuva kwalesi sifo sithinta umzimba wengane, iqala ukuzibonakalisa inezimpawu ezithile. Izimpawu ezivame kakhulu ezihambisana nokwakhiwa kwesifo sikashukela enganeni zifaka:
amanxeba amade angalapheki, izilonda zesikhunta ezijwayelekile zesikhumba,
ukwehla kwesisindo nokukhula okumangazayo, izinkinga zokuthuthuka komzimba,
isifiso sokudla futhi kunzima ukuqeda ukoma,
ukuchama kaningi futhi, kwezinye izikhathi, ukulala umbhede.
Isimpawu ngasinye sinezimbangela zaso futhi siba impendulo yomzimba ekuntuleni kwe-insulin.
Njengoba i-insulin enganele inomthelela ekuqongeleleni ushukela egazini, kuba nzima ngezinso ukufeza umsebenzi wazo wokuhlunga. Kunzima kubo ukubhekana nokuqukethwe ushukela omningi. Umthwalo ukhuphuka kakhulu, futhi bazama ukuthola uketshezi olwengeziwe emzimbeni, okuvela kulo ingane inomuzwa wokuqothuka wokoma.
Izingane zingakhalaza ngomlomo owomile, isikhumba esomile nesikhonkwane kuyabonakala. Isimo esinjalo siyingozi ngoba, kungaqondi okwenzekayo, ingane ngamanani amakhulu ingaphuza ujusi, ushukela nezinye iziphuzo ezinoshukela. Ukusetshenziswa okunjalo koketshezi olubi ngamanani amakhulu kubhebhethekisa ukukhula kweshukela ezinganeni.
I-polyphagy - umuzwa ongapheli wendlala
Isifiso esandayo nomuzwa wendlala uvela ngenxa yokuthi amangqamuzana omzimba wonke abhekene nendlala yamandla. IGlucose imane ihlanjwe ngaphandle komzimba ngomchamo, kuyilapho ingondli umzimba ngezinga elifanele. Amaseli abulawa yindlala aqala ukuthumela isibonakaliso ebuchosheni bengane ukuthi akukhona ukudla okwanele nezakhi zomzimba. Ingane ingakwazi ukudonsa ukudla ngezingxenye ezinkulu, kepha ngasikhathi sinye lapho izwa umuzwa wokugcwala isikhashana.
Ukwehla kwesisindo nokukhula okumangazayo
Naphezu kokudla okwandayo, ingane enesifo sikashukela ngeke ibe nesisindo. Ngenxa yendlala yamandla eqhubekayo, umzimba wengane uyaphoqelelwa ukuthi ubheke eminye imithombo yokudla okunempilo. Umzimba ungaqala inqubo ejulile yokubhujiswa kwe-adipose nezicubu zemisipha. Futhi, enganeni enesifo sikashukela, ukukhula komzimba kungahamba kancane.
Ngenxa yokoma njalo, ingane iqala ukusebenzisa isilinganiso esikhulu soketshezi, okuholela ekuchchweni ngokushesha. I-bladder ngokuphuza kakhulu cishe ihlala isesimweni esigcwele. Uma phakathi nosuku ingane ivame ukuya endlini encane, khona-ke ebusuku kuba nzima kuye ukulawula le nqubo.
Ukulunywa kungaba enye yezimpawu zokuqala zesifo sikashukela. Kuyaxaka ukuthi uma ukuchama ebusuku ebhedini kwengane kungakaze kubonwe ngaphambili. Lapho ushintsha imibhede, kufanele unake umchamo. Kungakhipha iphunga elibukhali, elingathandeki le-acetone, linamathele ekuthintweni futhi lishiya uphawu olumhlophe olungelona lwendalo ngemuva kokoma.
Kunolunye uphawu okudingeka unake ngalo isikhathi. Njengoba umchamo wobuntwana ku-mellitus yesifo sikashukela cishe uhlala uqukethe i-acetone, ukucasuka kwesitho sangasese sangasese kanye ne-urogenital ipheshana kungenzeka lapho uchama. Kaningi, izingane, ikakhulukazi amantombazane, zingakhalaza ngokulunywa yi-perineum.
Imiphumela yokuthuthuka kwalesi sifo ebuntwaneni
Enye yezinkinga eziphambili zalesi sifo amandla kashukela okunciphisa ukungatheleleki kwengane. Noma yisiphi isifo esithathelwanayo singahambisana nezinkinga ezinkulu. Isibonelo, umkhuhlane ojwayelekile ungageleza ku-pneumonia. Noma yikuphi ukuklwebeka, ukuhlukunyezwa, ukusikwa kanye namanxeba kungahle kungapholi isikhathi eside. Ukutheleleka njalo ngamagciwane wokukhunta kungenzeka, ngoba ukungavikeleki kuyayeka ukuvikela umzimba wezingane ngendlela efanele.
Ukwehla kwe-acuity ebonakalayo kuvame ukuba wumphumela walesi sifo. Lokhu kuhlotshaniswa namaseli endlala yamandla nokungalingani kwamanzi emzimbeni. Enye inkinga enkulu, eyaziwa ngokuthi unyawo lwesifo sikashukela, kungenzeka futhi. Uma izinga likashukela lingalawulwa isikhathi eside, ushintsho lwe-pathological olungenakuphikiswa izicubu zomsipha, imithambo yegazi nezinzwa ziqala ukwenzeka emzimbeni. Umphumela ulimaza emaphethelweni, kuze kufike ekwakhiweni kwe-gangrene.
Ukuvikela ingane kulesi sifo, kubalulekile ukuthatha izinyathelo zokuthibela njalo. Okokuqala, udinga ukuqapha ukudla. Ingane kufanele idle ngokwezilinganiso, kepha kaningi, cishe izikhathi ezingama-5-6 ngosuku. Vele, ukudla kufanele kube nokulinganisela futhi kuqukethe wonke amavithamini adingekayo kumzimba okhulayo.
Akudingekile ukukhipha ngokuphelele amaswidi ekudleni kwezingane ezinempilo, kepha inani lemikhiqizo enjalo kufanele lilawulwe ngokuqinile.
Uma ingane isencane isivele ikhuluphele noma isesigabeni sokuqala sokukhuluphala, abazali bakhuthazeka ngokuqinile ukuba bafune izeluleko ze-endocrinologist. Uma kunesidingo, udokotela uzokwenza ukuxilongwa futhi uzokwazi ukunikeza izincomo. Ungavakashela nomondli wezingane okwazi ukuthuthukisa uhlelo lokudla hhayi kuphela olunempilo, kepha futhi nolumnandi.
Njengoba ukusebenza ngokomzimba kusiza ukuqeda ushukela egazini futhi kunciphise amazinga kashukela, akufanele anganakwa. Cishe izikhathi ezi-2-3 ngesonto, ingane kufanele yenze imithambo yokuzivivinya efinyeleleka futhi kungenzeka.
Ungakuvikela kanjani okuncane kunoshukela
Ngokuphathelene nezinsana, ikakhulukazi uma ngesikhathi sokuzalwa isisindo sazo sidlula i-4,5 kg noma kunesiphetho somndeni salesi sifo, abazali akufanele bakhohlwe ngezinzuzo zokuncelisa ibele. Uma kungenzeka, kunconywa kakhulu ukuthi ingane inikezwe ubisi lwebele okungenani unyaka. Lokhu kuzosiza ukuqinisa ukungavikeleki kwezingane futhi kunciphise namathuba okuba nezifo ezibangelwa amagciwane, ezingase zivuse ukukhula kwesifo sikashukela ngemuva kwalokho.
Uma ngenxa yezizathu ezinengqondo kungenzeki ukuncelisa ingane ibele, kubaluleke kakhulu ukusondela ekukhetheni okunye ukudla okungenamsoco. Ukuxuba okwenziwe nge-protein yobisi lwenkomo kufanele kugwenywe. Kufakazelwa ukuthi kuvimbela umsebenzi wamanyikwe wezingane, okungaholela ekutheni ukunqanyulwa kokukhiqizwa kwe-insulin kube ngamaseli awo.
Izindlela ezilula zokuvimbela lokhu zinganciphisa amathuba okuthi ingane igule ngesifo sikashukela, noma ngabe umndeni unesifiso esifanayo. Isifo sikashukela, njengezinye izifo eziningi, kulula kakhulu ukusivimba kunokuhlala nakho impilo yakho yonke.
Kungenzeka ukuthi uyihlole kahle ingane futhi unqume ukuthi unayo i-mellitus yesifo sikashukela engakazalwa ngaphambi kokuzalwa kwengane. Ukuxilongwa okufika ngesikhathi kwe-fetus ngokuhlolwa okuningiliziwe kwama-pancreas kuyasiza ukwenza lokhu.
Esimweni sobungozi obukhulu balesi sifo ngalesi sifundo, kutholakala iziphazamiso ekukhuleni kwesitho enganeni. Lokhu kuxilongwa kubaluleke kakhulu ezimweni lapho omunye noma bobabili abazali benesifo sikashukela.
Izindlela zokuthola isifo sikashukela ezinganeni ezisanda kuzalwa:
Ukuhlolwa kwegazi ngomunwe ushukela,
Ukuxilongwa komchamo we-glucose nsuku zonke,
Ukutadisha umchamo oqoqwe ngasikhathi sinye wokuhlushwa i-acetone,
Ukuhlaziywa kwe-glycosylated hemoglobin.
Yonke imiphumela yokuxilonga kumele inikezwe udokotela we-endocrinologist, oyothi, ngesisekelo sabo, azokwazi ukunikeza ingane ukuxilongwa okuyikho.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela ezinganeni kufanele kwenziwe kuphela ngaphansi kokuqashwa kwe-endocrinologist.Kulokhu, abazali bezingane abagulayo kufanele bathenge i-glucometer esezingeni eliphakeme nenombolo edingekayo yemichilo yokuhlola.
Isisekelo sokwelapha uhlobo lokuzalwa kwesifo sikashukela, njengohlobo 1 sikashukela, imijovo yansuku zonke ye-insulin.
Ukuze kulawulwe ngempumelelo ushukela wegazi ekwelapheni ingane, kuyadingeka ukusebenzisa i-insulin, isenzo esifushane nesesikhathi eside.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuqonda ukuthi ukuthunyelwa kwe-insulin ye-hormone akuyona ukuphela komsebenzi wamanyikwe. Iphinde ifake ama-enzyme adingekayo ekusebenzeni okuvamile kohlelo lokugaya ukudla. Ngakho-ke, ukuze uthuthukise imisebenzi yamapheshana esiswini futhi uguqule ukuguqulwa kokudla, ingane iyanconywa ukuthatha izidakamizwa ezifana neMezim, Festal, Pancreatin.
Ushukela ophakeme ngokweqile ubhubhisa izindonga zemithambo yegazi, engadala ukuphazamiseka kokujikeleza kwegazi ikakhulukazi emaphethelweni aphansi. Ukuze ugweme lokhu, kufanele unikeze ingane yakho imithi yokuqinisa imithambo yegazi. Lokhu kufaka phakathi zonke izidakamizwa ze-angioprotective, okungukuthi iTroxevasin, iDetralex neLyoton 1000.
Ukubambelela ngokuqinile ekudleni okubandakanya konke ukudla okunokuqukethwe okunoshukela okuningi ekudleni kwesiguli esincane kubalulekile ekwelashweni kwesifo sikashukela ezinganeni.
Kodwa-ke, akufanele ulahle ngokuphelele amaswidi, ngoba angasiza ekusizeni ingane ngehle ishukela elibukhali ngenxa yedosi ye-insulin eyeqisayo. Lesi simo sibizwa nge- hypoglycemia, futhi singaba sengozini empilweni.
Kwividiyo ekulesi sihloko, uDkt Komarovsky ukhuluma ngesifo sikashukela sabantwana.